USEBENZISA NJANI UKUNGENISA NGOKUBHALA NGESANDLA KWIGMAIL KUNYE NOGOOGLE AMAXWEBHU - ITEKNOLOJI
Usebenzisa njani ukuNgenisa ngokuBhala ngesandla kwiGmail kunye noGoogle amaXwebhu
Ngaba ngekhe kulunge ukuba ungafaka umyalezo kumyalezo we-Gmail ngeelwimi ezingezizo ezokubonelela ngebhodi yezitshixo? Ngaba kungaphola ukuba ungathatha amanqaku kuGoogle amaXwebhu usebenzisa umnwe wakho njengepensile kwisixhobo sakho sokuchukumisa? Ewe, kuvela ukuba ungazenza zombini ngokunika amandla ukubhalwa ngesandla kwezixhobo zombini.
Yenza igalelo lokubhala ngesandla ukuze ubhale i-imeyile ngesandla.
UKUYA iposti yangoku kwi-Blog esemthethweni yeGmail yazisa inqaku kwaye isebenza kakuhle ukuba uthatha ixesha lakho. Kukho uluhlu olukhulu lweelwimi ezixhaswe yinxalenye ngamathuba, ukuba ungayibhala, uGoogle angayiqonda. Uya kudinga ukwenza izixhobo zokufaka kuseto lwakho kwaye ukhethe iilwimi ezithile ofuna ukuzenza ngaphambi kokuba uzame. Phuma imiyalelo Kwindawo yokuxhasa iGoogle ngolwazi oluthe kratya. Nje ukuba unikwe amandla nangona, cofa nje kwiqhosha kwaye uqalise ukubhala.
Qiniseka ukuba wabelana ngale nto kunye nabaphi na abahlobo bakho abaneelwimi ezininzi, inokuza iluncedo.
Umthombo woqobo - Ibhlog yeGosa elisemthethweni-UkuNgena ngokuBhala kuza kwiGmail kunye noGoogle amaXwebhu
Eyona ncwadi ingeyonyani
Ungasifumana njani isaphulelo kwiAmazon ukuze iphononongwe
ukuziva unganqabisekanga kubudlelwane
Wazi njani ukuba umtshato wakho uphelile
iingoma ezilungileyo ukukhala kuzo
Ufuna ntoni ngoku
Ubudlelwane Ibhalansi Yobomi Ukuphumla Kokulala Uphononongo Lweapp Ubugcisa